Amandla elanga aqhathaniswa neminye imithombo yamandla avuselelekayo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Amandla elanga aqhathaniswa neminye imithombo yamandla evuselelekayo
UDaniel Palomino | | Amandla omoya, amandla wokubacindezela, Photovoltaic Solar Amandla
Yonke amandla avuselelekayo anezinzuzo zayo, kanye nezingqinamba zayo, kepha kuthiwani uma siqhathanisa amandla elanga nezinye izinto ezivuselelekayo?
Isibonelo, kumandla we-hydropower nomoya kunomehluko omkhulu ngokuqhathaniswa namandla elanga.
Okuningi kwalokhu kwehluka kungabonakala ngendlela ejwayelekile emazweni amaningi asefakiwe, kepha uma sibheka ngaseSpain, lo mehluko mkhulu kakhulu.
1 amandla wokubacindezela
2 Amandla omoya
3 Amandla elanga
Ukukhuluma kancane ngamandla ngamunye okukhulunywe ngawo, ngingasho ukuthi uma kwenzeka amandla wokubacindezela ngokuba nezinqolobane ezanele zokusebenza ukuze ukukhiqiza la mandla asikwazi ukufinyelela lutho olungaphansi kwesibalo se 20.000 MW.
Kepha, kuhlala kukhona kodwa, kunjengoba ngishilo, igama eliwumlingo lapha lithi "operative" ngoba akuwona wonke amadamu angasebenza Futhi angibhekiseli ezinkingeni zokugcina noma ukusebenza (okuzophinde kube khona) kepha kunamanzi, leyo mithombo yemvelo neyindlala edingekayo ukukhiqiza lawamandla.
Njengoba izitshalo ziseduze nedamu ezithatha amanzi okunisela, izidingo eziyisisekelo nesomiso okujwayelekile ezweni lethu noma okungenani ngokwengxenye, kwenza amadamu amaningi angakwazi ukuqala.
Lokhu kusho ukuthi nge la mandla awakwazi ukubalwa njalo Ngenxa yokuthi izimo zemvula nokugcinwa kwamanzi ezidingekayo ukwenza izimpophoma nokukhiqiza amandla adingekayo kufanele kuhlangatshezwane nazo.
Ngakolunye uhlangothi esinakho amandla eolic, sinamandla amakhulu engqalasizinda alo mandla esikwaziyo ukuwenza khiqiza cishe u-40% wesamba kudingekile, okungalingana ne- I-23.000MW, futhi ngaleyo ndlela bakwazi ukunikeza ingxenye enkulu yensimu yaseSpain.
Futhi nali elinye igama lomlingo osuvele unalo engqondweni, "umoya", ngaphakathi usuku ngaphandle komoya akukhiqizwa lutho futhi esinezinjini ezimbalwa zomoya ngaphandle kokwenza lutho.
Kodwa-ke, futhi angisazinwebeki ngokuvuseleleka kwangaphambilini, sine- amandla elanga.
Akunandaba ukuthi izitshalo zakho zokukhiqiza zitholakala kuphi, kunoma iyiphi indawo yaseSpain amandla azokhiqizwa nsuku zonke zonyaka.
ISpain yizwe leLanga futhi kufanele sikusebenzise lokho ngandlela thile.
Lapha uzongitshela, alikho yini igama lomlingo emandleni elanga njenge "cloudy"?
Impela yebo, kepha Yize liguqubele, izehlakalo zokukhanya ziyaqhubeka nokufika Futhi izitshalo zelanga nazo zingawasebenzisa lawo mandla, kusobala ukuthi zizokhiqiza amandla amancane kunasemini enelanga, kodwa ziyakwenza.
Futhi "ubusuku"? Kulokhu singasho ukuthi uma kuliqiniso ukuthi amandla elanga awasetshenziswa kakhulu ebusuku, ngiqonde ukuthi awakhiqizwa, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi ngalesi sikhathi amandla kagesi aphansi kakhulu.
Uma uzibuza ukuthi kungani amandla elanga engathuthukisiwe kakhulu nangaphambilini uma kuqhathaniswa namandla omoya, ngizokutshela lokho izindleko.
Sonke sibheka emaphaketheni ethu futhi uma sigxila kulokho kuphela, izindleko zomunye nomunye zihluke kakhulu.
Kulwelwe ukubanciphisa Futhi sehlile eminyakeni yamuva uma kukhulunywa ngamandla elanga kepha izindleko zisaphakeme kunamandla omoya.
Kubukeka sengathi kunenzuzo enkulu ukusebenzisa amandla omoya ngaphezu kwamandla elanga naphezu kokubona inzuzo enkulu eshiwo ngaphambili ezinsukwini eziningi amandla omoya ngeke akhiqize lutho ngenxa yokushoda komoya ngenkathi amandla elanga esebenza kakhulu ekukhiqizeni kwawo.
Ngaphezu kwalokho, singena odabeni lwezepolitiki ngendlela ecashile, angifuni ukuya phezulu nalolu daba ngezizathu ezahlukahlukene ngakho-ke ngizokunikeza imivimbo emincane yokuxubha.
Ukwazi iSpain, uma izindleko zamandla elanga beziphansi kunezomoya, Kubonakala kimi ukuthi amandla omoya azoqhubeka nokunqoba ngenxa ngoba wona kanye umqondo wokuba nokukhiqizwa kwamandla okuqhubekayo ungenye yezizathu ezinkulu zokuthi kungani amandla elanga kwesinye isikhathi emile.
Isibonelo esicacile sinakho Murcia okhubazekile iminyaka naphezu kokuba nendawo enelungelo lokufaka amandla anjalo.
Kubukeka sengathi konke kuhamba phambili futhi ukuma kumile phansi, kepha izithiyo ezibekiwe ziyahlaba umxhwele.
Izwe lapho, noma ngabe libukeka lingenabulungiswa kangakanani, Ayivumi ngokuzithandela sebenzisa la mandla ukwenza "ukuzisebenzisela wena" kanye nokukwazi ukunciphisa izinombolo ezethusayo emindenini eminingi ye-invoyisi.
Kuze kube manje ngize nalokhu kubonakaliswa kokugcina futhi ngithi kuphela ukuthi yize kubonakala sengathi ngithanda iLanga kuphela (uma lihambisana nepikinikini engcono kakhulu) akunjalo, ngibheja wonke futhi ngokuphelele amandla avuselelekayo, ezinye zingcono kunezinye, yize kuya ngokuthi zitholakalaphi futhi kufanele ube nawo wonke la mandla ukuze ukwazi ukunikezela wonke umuntu.
Ngoba ikusasa liyasebenza kabusha
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Amandla elanga aqhathaniswa neminye imithombo yamandla evuselelekayo
Kuchazwe kahle kakhulu futhi, kunjalo, kuvumelana kakhulu nalokho okuphawuliwe.
Sonke siyalwazi udaba lwezepolitiki ... yize kamuva, akwaziwa ukuthi kungani, akubonakali ebhokisini lokuvota. Noma kunjalo, siseyizimvu kulokho okushiwo abelusi
Ngiyabonga kakhulu Carlos, ngiyajabula ukuthi uyithandile.
Inkinga enkulu ukuthi ekugcineni ukuvuselelwa kanye nezinye izenzo zokwenza ngcono izinga lethu lempilo kusale emuva kakhulu.
Abelusi, njengoba usho, abahle kakhulu emsebenzini wabo futhi iSpain iyakubona lokho okuningi.
Ukuqhathanisa namandla omoya mayelana nokukhiqiza okungaphezulu noma okuncane akuyona into enzima. Kuyathakazelisa ukuhlinzeka ngokuqhathaniswa kwezinombolo ezithile, njengesilinganiso sesitshalo esisodwa nenye eSpain. Ngaphezu kwalokho, kunezici ezingavamisile ukubhekwa lapho uziqhathanisa, ezifana nomhlaba abakuwo nokusetshenziswa kwawo okuhambisanayo nokufakwa.
Ngigxile kuphela ekuqhathaniseni ukukhiqizwa kukagesi ngoba yilokho “esingakubona” uma kusetshenziswa ekhaya ukusebenzisa amandla.
Vele singaqhathanisa la mandla nokunye okunye nezinye izinto okufanele sizinake, njengendawo, izindleko zokukhiqiza, umthelela abawenzayo, izinzuzo nezinkinga kanye nokunye okude njll.
Inkinga, ukuthi kufanele ugxile kokukodwa ngoba uma sikhuluma ngakho konke, kusinikeza ukubhala incwadi.
Ngiyabingelela Mario, ngiyabonga ngokuphawula kwakho.
Uhlobo luni lwezokuthutha olusebenza kahle kakhulu e-EU?
ISpain iphakathi kwamazwe e-EU anciphisa ukukhishwa kwawo okungenani